Mayelana nale sayithi
Sawubona umsebenzisi we-adblock…
Kubukeka sengathi ulahlekile kancane…
Izincwadi zeRussia Revolution
Isihlokwana saseRussia Revolution #1
Isihlokwana saseRussia Revolution #2
Isihlokwana saseRussia Revolution #3
Isihlokwana saseRussia Revolution #4
Isihlokwana saseRussia Revolution #5
Isihlokwana saseRussia Revolution #6
Isihlokwana saseRussia Revolution #7
Imibhalo eyisihlubuki yaseRussia
Imibhalo yaseRussia Yokuvuselela
Imibuzo yase-Russian Revolution
Ihluzo zaseRussia Revolution
Izazi-mlando zaseRussia Revolution
Amabalazwe eRussia Revolution
Imibuzo yememori yaseRussia Revolution - imicimbi 1907-1916
Imibuzo yememori yaseRussia Revolution - imicimbi 1917
Imibuzo yememori yaseRussia Revolution - imicimbi 1918-1924
Imibuzo yememori yaseRussia Revolution - izinguquko
Imibuzo yememori yaseRussia Revolution - ama-tsarists
Imibuzo yememori yaseRussia Revolution: imiqondo (I)
Imibuzo yememori yaseRussia Revolution: imiqondo (II)
Imibuzo yememori yaseRussia Revolution: imicimbi 1906 kuya ku-1913
Imibuzo yememori yaseRussia Revolution: imicimbi 1914 kuya ku-1916
Imibuzo yememori yaseRussia Revolution: imicimbi eya ku-1905
Imibuzo yememori yaseRussia Revolution: imibono
Quizzes yase Russian Russian inkumbulo
Imibuzo yeRussia Revolution #1
Imibuzo yeRussia Revolution #2
Imibuzo yeRussia Revolution #3
Imibuzo yeRussia Revolution #4
Imibuzo yeRussia Revolution #5
Imibuzo yeRussia Revolution #6
Quizzes Russian Revolution
Izingcaphuno zaseRussia Revolution
Isihloko saseRussia Revolution
I-Russian Revolution Trivia
I-Russian Revolution ubani
Russian Revolution izwisearch - imiqondo
Russian Revolution izwisearch - abantu
I-Russian Revolution izwisearch - izindawo
Russian Revolution yamazwi
I-Russian Revolution bekungumcimbi odabukisayo ongagcinanga nje ngokuguqula inkambo yeRussia, futhi futhi kwakha ikhulu le-20th emhlabeni jikelele.
Ekupheleni kwekhulu le-20th, Russia wawungomunye wemibuso emikhulu kunayo yonke emhlabeni. Ukwehla komhlaba kusuka eYurophu kuye e-Asia futhi kwahlukaniswa ingxenye yesithupha yomhlaba. Isakhamuzi saseRussia seqe abantu abayizigidi ezingama-100, sithathe inqwaba yezinhlanga nezilimi. Amabutho ayo abusa ukuthula ayedlula wonke emhlabeni.
Naphezu kobukhulu bawo obukhulu namandla, iRussia yayisenkathi yakudala njengoba yayinamuhla. Umbuso waseRussia wabuswa yindoda eyodwa nje, UTsar Nicholas II, owayekholelwa ukuthi igunya lakhe lezombusazwe lalisipho esivela kuNkulunkulu. Ku-1905, amandla wokuzimela weTsar abekelwa inselelo ngawo izinguquko nezinguquko ukufuna ukwakha iRussia yeningi yentando yeningi. Umbuso wakudala wasinda izinselelo ze-1905 -Kodwa imibono nemisindo eyivezile ayizange inyamalale.
Impi Yezwe I ukhonze njengophawu lwezinguquko eRussia. Njengazo zonke izindlovukazi zakudala zaseYurophu, iRussia yangena empini ngentshiseko futhi ingacabanganga ngemiphumela. Nge-1917, le mpi yayidale izigidi zabantu ukufa, iqeda umnotho waseRussia futhi yanciphisa ukusekelwa okudumile kwe-tsar nombuso wakhe.
UNicholas wasuswa emandleni futhi esikhundleni sakhe wabekwa uhulumeni wesikhashana - kepha lo mbuso omusha wabhekana nezinselelo zawo, njengezingcindezelo zempi eziqhubekayo nokukhuphuka kwezombusazwe phakathi kwezinhlangano ezisebenzayo. Ukuvukelwa kwesibili ngo-Okthoba 1917 kwabeka iRussia ezandleni ze AmaBolsheviks, ososayensi bezenhlalo onobuhle obuholwa UVladimir Lenin.
ULenin namaBolsheviks badumisa ubuhle be I-Marxism futhi wathembisa umphakathi ongcono wezigaba ezisebenzayo. Kepha bangadumisa futhi bafeze lezi zithembiso? Ngabe uLenin nombuso wakhe omusha bangazithuthukisa izimo zabasebenzi, ngenkathi benqoba ukuqothuka kwempi nokudonsela iRussia ezweni lesimanje?
Iwebhusayithi ye-Alfaus yaseRussia Revolution iyinsiza ebanzi esezingeni eliphezulu yokufunda okwenziwe eRussia phakathi kwe1905 ne1924. Kuqukethe imithombo ehlukene eyengeziwe neyisisekelo ye-400, efaka nemininingwane izihloko ezifingqiwe, amadokhumenti futhi izethulo zesithombe. Iwebhusayithi yethu futhi iqukethe izinto ezibhekisela kuzo ezifana amabalazwe futhi amamephu emiqondo, izikhathi, glossaries, a 'ubani'kanye nolwazi ku- umlando futhi izazi-mlando. Abafundi bangaphinde bahlole ulwazi lwabo futhi bakhumbule ngohlu lwezinto ezenziwa online, kufaka phakathi kwakha, emaphazili futhi ukubekwa kwamagama. Imithombo eyisisekelo eceleni, konke okuqukethwe Kumlando we-Alfa kubhalwe ngothisha abaqeqeshiwe nabanolwazi, ababhali nezazi-mlando.
Ngaphandle kwemithombo eyinhloko, konke okuqukethwe kule webhusayithi © I-Alpha History 2019. Lokhu okuqukethwe akunakukopishwa, kuphinde kushicilelwe kabusha noma kusatshalaliswe kabusha ngaphandle kwemvume ebonakalayo yomlando we-Alfa. Ngemininingwane engaphezulu ngokusetshenziswa kwewebhusayithi ye-Alfa's History nokuqukethwe, sicela ubheke kithi Imigomo Yokusebenzisa.
Sesha le sayithi:
Impi Yezwe I
Lesi siza seRussia Revolution siqukethe izindatshana, imithombo kanye nemibono ngezigameko ezenzeka eRussia phakathi kwe1891 ne1927. Leli sayithi lenziwa futhi lagcinwa ngumlando we-Alfa. Inamagama we-173,003 kumakhasi we-276 futhi yagcina ukuvuselelwa ngo-Agasti 3rd 2019. Ngeminye imininingwane, vakashela ikhasi lethu le-FAQ noma imigomo yokusebenzisa.